Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nchedo njem na Mberede » 3 nwụrụ, mmadụ 6 merụrụ ahụ na nnukwu mgbawa Madrid
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • Safety • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ebe mgbawa ahụ adịghị anya na Puerta de Toledo, otu n'ime ọnụ ụzọ ámá obodo ahụ na ebe ndị njem nleta na-ewu ewu
Oke ihe gbawara etiti Madrid taa, na-adọka ụlọ, na-ebibi ụgbọ ala na ikpuchi n'okporo ámá dị n'okpuru ebe a, obere oge tupu elekere atọ nke oge.
Dị ka nkwupụta si Madrid Ndị isi obodo, ka ọ ghara ịbụ mmadụ atọ nwụrụ na mmadụ isii merụrụ ahụ na mgbawa ahụ. O doro anya onye ụkọchukwu tọrọ n’otu ụlọ ihe dakwasịrị ya na ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ na-achọ iru ya.
Amabeghị ihe kpatara ihe ahụ gbawara.
Foto na ihe nkiri vidio nke ndị na-ahụ ihe juru anya na-ese na-egosi ụgbọ ala ndị mgbawa ahụ bibiri na anwụrụ ọkụ si na ụlọ elu nke ụlọ.
Onye nta akụkọ mpaghara kwuru a Mgbawa “jọgburu onwe ya” mere na Calle Toledo, otu okporo ámá dị na ogbe ndịda nke isi obodo Spain. Ndị na-aza ajụjụ mbụ gbochiri okporo ụzọ ahụ.
Otu ọnụ na-ekwuchitere City Council nke Madrid gosipụtara na ndị ọkụ ọkụ, ndị uwe ojii na ndị ọrụ nchekwa obodo na-aza ihe a mere.E zigala ndị ọrụ asatọ nke ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ na mpaghara ahụ, dị ka akụkọ akụkọ mpaghara, TeleMadrid si kwuo.
A na-akọ na otu ụlọ akwụkwọ emebiwo site na mgbawa ahụ, na anwụrụ ọkụ a hụrụ na vidiyo vidio n'okporo ámá na-ekwu na ọ na-abịa site n'ụlọ ndị nọọsụ na-esote ụlọ ebe mgbawa ahụ mere.
Ihe kpatara ntiwapụ ahụ apụtabeghị ugbu a. Reportedlylọ ahụ kacha metụta mgbawa a kwuru na ọ bụ nke achịbishọp ndị Katọlik nke Madrid.
A na-akpọpụ ndị bi mpaghara ahụ, gụnyere ọtụtụ ndị agadi si n'ụlọ ndị nọọsụ, na ndị uwe ojii na-adụ ndị mmadụ ọdụ ka ha pụọ ​​ma ọ bụrụ na enwere ntiwapụ ọzọ.